Ugixabezwe engu-70 owesilisa waseNigeria ngolwezidakamizwa | News24
Ugixabezwe engu-70 owesilisa waseNigeria ngolwezidakamizwa
Durban - Owesilisa waseThekwini owayedayisa ngezidakamizwa, obese ehlale iminyaka engu-7 esitokisini, ugwetshwe iminyaka engu-70 ebhadlaa ejele.
UJohn Jekwu Chigbu, 41, ongowokudabuka eNigeria, ulahlwe amacala amabili okuthola imali ngokungemthetho, elilodwa lokukhwabanisa nangu-15 okudayisa ngezidakamizwa eNkantolo yeMantshi yaseThekwini.
OLUNYE UDABA: Kuboshwe 37 ngokushushumbisa izidakamizwa
Lowo asolwa naye, uSunny Augustine Osazuwa, 37, naye odabuka eNigeria, utholwe enamacala amabili okudayisa i-cocaine wase egwetshwa iminyaka emithathu ejele noma ahlawule u-R10 000, kubika iSunday Tribune.
UChigbu, owaboshwa nonkosikazi wakhe wakuleli uSithembile Sbongile Chigbu, 29, nabanye ababili bebelokhu begcinwe esitokisini kule minyaka eyisithupha nesigamu eyedlule, kusho okhulumela amaphoyisa uBrigadier Vish Naidoo.
Unkosikazi kaChigbu no-Osazuwa bakhishwa ngebheyili, kanti kubikwa ukuthi unkosikazi kumanje ugcwele amathafa kulandela ukuhluleka ukuvela enkantolo.